Coating / Paint / Coating Inspector / Paint Inspector
musha » Blog » MUFANANIDZO PAKATI PEKUPENDA & KUSHANDA
Kuchengetedza kuchengetedza Kuvimbika idambudziko rakaoneswa nemaInjiniya, Vaongorori, neManeja muMafuta, Gesi, Petrochemical, nemamwe maindasitiri akabatana. Kuongorora kushanda kwekudzivirira, kuwedzera chitarisiko chemuviri, kudiwa kwesarudzo dzekuchengetedza kuchanetsa kune vanodzivirira ngura vachiri mumaindasitiri. Kunyangwe iri pendi kana Kuputira, munhu anofanirwa kunzwisisa mutsauko, uye misimboti panguva uye mushure mekushandisa.
Saka, ndeupi musiyano pakati peavo? Tsananguro dzakasiyana siyana dziri kuwanda mumaindasitiri edu nedudziro zhinji dzisingaenzaniswi.
Paint = Chitarisiko kana Aesthetics
Kuchovha = Kuchengetedza kudzivirira uye Kuita
mufananidzo: imvura inokwanisa kuomesa uye kurapa kune risingaperi uye rakaomarara firimu. Chinangwa chakakosha ndechekupa aesthetics uye yunifomu yekupedzisa iyo inowedzera zvakare kunzi "Kushongedza Chinangwa" chete. Iyi firimu yakashandiswa inogona kupa yunifomu kupedzisa, rudzi rwemavara, mamiriro ekunze (pendi dzazvino), uye madhaka uye zvisina-mavara. Iko kukosha kwekugadzirira kwepasi kushoma kana tichienzanisa neyechinyakare zvigadzirwa. Dziviriro yemvura inogona kuiswa pamusoro pekongiri yapera, gypsum, uye zvisina kukosha simbi zvinhu (zvinhu zvemumba (kureva simbi simbi, hwindo reimba, nezvimwewo.
mienzaniso: Acosterone, Waterborne Acrylic, Varnish, Mafuta-based pendi, nezvimwewo,
bemhapemha: Nezve zvekutanga zvigadzirwa, iyo yekupfeka inenge yakafanana. Iko kupenda hakugone kuita kwakawanda kuita, asi kupfeka kunogona kuita nezvimwe zvinongedzo. Sarudzo yezvinhu zvakajairwa zvinoenderana nemhando yeiyo substrate, tembiricha, nharaunda, mashandiro, nzira dzekushandisa, mutengo wehupenyu hwekutenderera, uye zvinhu zvakasiyana zvinobatanidzwa. Mune dudziro yakapusa, Kupfeka kunoiswa kuchengetedza Corrosion uye zvimwe zvinangwa uye zvakanangwa, asi aesthetics idiki diki yekukosha mukukora kupfuura pendi. Zvisinei, muchikamu chekupedzisira, kukosha kwekupedzisa kunodiwa nemaindasitiri mazhinji.
Iyo yakashandiswa firimu inogona kupa kuramba kubva kutembiricha, mamiriro ekunze, nharaunda, abrasion, kukanganisa, uye ngura. Pamusoro pezvo, iyo firimu yakaomeswa inogona kupa mukana wekuchinjika, kuchengetedza ngura, kukwana kwemvura, kuchengetwa kwemavara, anti-ganda, anti-skid, uye anti-kusvibisa, nezvimwe.
Mepende dzese hadzifungidzirwe kuchengetedza galosi, asi mune zvese zvipfeko zvinoonekwa semapendi nekuda kwekuita kwakanyanya nemhando dzakakodzera. Industrial Corrosion dziviriro, pendi iri kuiswa uye kuita kwayo kunoongororwa nguva nenguva. Coating Inspector Chirongwa / Paint Inspector Chirongwa / SSPC PCI Kudzidziswa / FROSIO Surface Kurapa
Mienzaniso: Epoxy, Inorganic Zinc Silrate, Polyester, Vinyl Ester, Heat inodzivirira Silicone, nezvimwewo,
/ Coating Inspector chirongwa / pendi Inspector chirongwa / FROSIO Surface Kurapa / SSPC PCI Dzidzo
NextKUSHANDISA KUSHANDISA MITIMA IN COATING INDUSTRiesNext
1 funga nezve "KUSIYANA PAKATI PEKUPENDA & KUSHANDA"
07 / 01 / 2021 pa 6: 00 PM
Sekureva kwangu, pendi ndezvekutaridzika uye runako rweimba uye zvemukati. Kupfeka kwakafanana nenhovo yemufananidzo waitwa. Kupfekedza kunoita sekuchengetwa, kudzivirira mvura, ngura uye kuita ngura uye kudzivirira.